SumoMe: Duru ọgbọ maka saịtị gị ... na Nkwado dị ukwuu | Martech Zone
Anọ m na-agụ n’oge na-adịbeghị anya Jeff Goins 'weebụsaịtị ma chọpụta ihe njikọ ole na ole m na-amataghị na saịtị WordPress ya. M na-eji Nchọgharị Okwu WordPress ime nnyocha ụfọdụ. Jeff na-eji ngwa mgbakwunye akpọrọ SumoMe mere site AppSumo. Mgbe m nyochachara atụmatụ niile nke SumoMe, enwere m afọ ojuju.
Enwere m ajụjụ ụfọdụ gbasara plugins na ndị otu SumoMe zara ma za ha niile otu ụbọchị. Ọ dị mma ịhụ ụdị nlebara anya ahụ enyere ndị ahịa aka n'elu ikpo okwu.
SumoMe mepụtara nnukwu ndakpọ ngwaahịa ma nwee ike itinye ya na ọtụtụ nyiwe usoro njikwa ọdịnaya. Isi ụlọ ọrụ ahụ bụ ọgbọ na-eduga na ebe nrụọrụ weebụ. Companylọ ọrụ ahụ kwenyere na mmetụta dị kpọmkwem. Ka m kwatuo ngwaahịa SumoMe.
Ogwe Smart, Ndepụta Ihe na Pịgharịa igbemee ntinye aha eNewsletter weghaara ihe di mfe ma adighi anya. SumoMe na-enye ndị akaebe ndị ahịa banyere igosi n'ezie enweta ego na-eduga traction.
Na-edu nyere aka wulite mgbasa ozi email gị site na inye onyinye.
Nchịkọta ọdịnaya na Maapụ Okpomoku nye ebe na otu ndi nleta si ele ihu akwukwo na saiti gi. Ma i nwere ike gbanwee mkpọsa na otu click.
Share elekọta mmadụ na ebe nrụọrụ weebụ gị na desktọọpụ na ike mkpanaka. Nke a gụnyekwara ịkesa ọdịnaya Na-egosi na Ihe Ekere foto.
Kpọtụrụ Ụdị awade ụzọ dị mfe iji kpọtụrụ ụlọ ọrụ.
SumoMe na-enye ọtụtụ atụmatụ, dabere na mkpa na mmefu ego gị, gụnyere Onye ọ bụla, Bundled na Pro. Mụtakwuo otu SumoMe nke AppSumo ngwa mere ebili mmiri.
Esi Wụnye SumoMe WordPress Plugin
Ọ bụrụ na ị nọ na WordPress, nwụnye dị mfe karị ebe ọ bụ na SumoMe amalitela ngwa mgbakwunye nwere ike ibudata ma wụnye ya. Nke a bụ otu:
Tags: ụdị kọntaktịnchịkọta ọdịnayantapu mkpọsaonye na-eme eluoyiyi òkèedu ọgbọonye na-ewu ụlọigbe mpịakọtammanya mmanyammekọrịta mmadụ na ibe yasumo.medị mma
Atụmatụ 7 Na-agbanwe Ngwa Ngwa